लकडाउनमा के गर्दै छन् खेलाडी ? - दैनिक नेपाल न्युज
लकडाउनमा के गर्दै छन् खेलाडी ?
– शेरबहादुर सिंह
महेन्द्रनगर, ९ जेठ: कोरोनाको दोस्रो लहर शुरु हुनुअघि दिन नबिराएर कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरस्थित कडर्डहल परिसरमा नियमित अभ्यासमा भेटिने कुस्ती खेलकी साग पदक विजेता खेलाडी शिवानी दुबेको लकडाउनपछि दैनिकी नै परिर्वतन भएको छ ।
कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि सरकारले जारी गरेको निषेधाज्ञाले सार्वजनिक स्थलमा खेलकुद गतिविधि बन्द भएसँगै शिवानी अहिले नियमित घरको बरण्डामा अभ्यासमा व्यस्त हुनुहुन्छ । “दौड हुँदैन अरु शारीरिक अभ्यास घरमै भइरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “बुवा पनि खेलाडी भएकाले घरको छतमा नियमित अभ्यास गरिरहेकी छु ।”
सिँढी, बरण्डा र छतमा अभ्यास गरिरहेकी शिवानीले कोरोना नियन्त्रणमा आइसकेपछि कबर्डहलमा अभ्यास गर्ने पर्खाइमा रहेको बताउनुभयो । राष्ट्रियस्तरमा सात स्वर्ण र १३ औँ दक्षिण एशियाली खेलकुद प्रतियोगितामा रजत पदक विजेता शिवानीले तीन महिना भारतको हरियाणामा समेत प्रशिक्षण लिएर कोरोनाका कारण फर्किएको बताउनुभयो ।
“कोरोनाले भारतमा पनि लकडाउन भयो, फर्किएर घर आएँ”, उहाँले भन्नुभयो, “भारतमा दुई वर्ष प्रशिक्षणका लागि सम्झौता भएको छ ।” शिवानीका बुबा राजु पनि कुस्तीका राष्ट्रिय खेलाडी हुनुहुन्छ । छोरीले घरमा प्रशिक्षण गरिरहेको भिडियोहरु उहाँले सामाजिक सञ्जालमा समेत पोष्ट गर्दै आउनुभएको छ ।
बक्सिङ ओलम्पियन तथा प्रशिक्षक डम्बरदत्त भट्टले गाउँतर खेलाडीहरु आन्तरिक प्रशिक्षणमा रहेको बताउनुभयो । “घरमै रहेर पनि खेलाडीहरु ‘फिटनेस’का अभ्यासहरू गरिरहेका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “विषम परिस्थितिले खेलकुद क्षेत्र पनि निकै आक्रान्त बनेको छ ।”
उहाँले आम नागरिकलाई पनि प्रतिरोधात्मक शक्तिका लागि स्वास्थ्य सर्तकता अपनाएर घरमै व्यायाम गर्न सुझाव दिनुभयो । “घरमै बसेर पनि जो कोहीले व्यायाम गर्दा स्वास्थ्यका लागि लाभदायक नै हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “बीचको केही समय खेल गतिविधि सञ्चालनमा आए पनि दोस्रो लहर आएपछि पुनः स्थगन भए ।”
गत वर्ष पनि कोरोना शुरु हुँदा खेल क्षेत्र प्रभावित भएको बताउँदै जिल्ला खेलकुद विकास समितिका कार्यालय प्रमुख गोपालदत्त भट्टले दोस्रो लहरमा पनि केन्द्रको निर्देशनअनुरूप सम्पूर्ण खेल गतिविधि बन्द गरिएको जानकारी दिनुभयो । “अहिले स्वास्थ्य सतर्कता अपनाएर आफू सुरक्षित रहने बेला हो”, कार्यालय प्रमुख भट्टले भन्नुभयो, “खेल गतिविधि नहुँदा खेलाडीहरु प्रभावित हुनु स्वाभाविक हो ।”
त्यसैगरी यहाँस्थित कबड्डी प्रशिक्षक विष्णुदत्त भट्टले खेलाडीहरु अहिलेसम्म सङ्क्रमित हुनबाट जोगिएको बताउनुभयो । “यस्तो बेला बाहिर निस्कन गाह्रो छ”, उहाँले भन्नुभयो, “कबड्डीका खेलाडीहरु गाउँघरमै आन्तरिक व्यायाममा व्यस्त छन् ।”
कञ्चनपुरमा फुटबल, भलिबल, कराँते, कबड्डी, क्रिकेट, बक्सिङ, तेक्वान्दो, भारोत्तोलनलगायतका खेलको प्रशक्षिण हुने गर्छ । भारोत्तलनका राष्ट्रिय खेलाडी सुवास उपाध्यायले लकडाउनका कारण एक महिनादेखि प्रशिक्षण बन्द भएको बताउनुभयो । “सामान्य व्यायामहरु घरमै भइरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “नियमित प्रशिक्षण नहुँदा निकै तनाव हुन्छ ।” खेलाडीहरुले बन्द खुल्दा पुनः शुरुआतदेखि प्रशिक्षणमा होमिनुपर्ने अवस्था आउने उहाँको भनाइ थियो ।
यहाँका कुस्ती खेलाडी सुरेश चुनारा पनि घरमा सामान्य प्रकारका खेल गतिविधि गरेर दैनिकी काटिरहेको बताउनुहुन्छ । “घरबाहिर गएर यस्तो बेला प्रशिक्षण गर्नु भएन”, कुस्तीका अन्तर्राष्ट्रिय पदक विजेता खेलाडी चुनाराले भन्नुभयो, “प्रशिक्षण नहुँदा खेल क्षेत्र नै पछि धकेलिने सम्भावना रहन्छ ।” नेपाली सेनाको त्रिभुवन आर्मी क्लबसित आबद्ध रहेर कुस्ती खेल्दै आएका चुनारा महेन्द्रनगरमा डेरा गरी बस्दै आउनुभएको छ । गत वर्ष कोरोना शुरु भएयता प्रशिक्षणले राम्ररी उचाइ लिन नसकेको उहाँको भनाइ छ । (रासस)
विश्वकप फुटबल छनोट : नेपालद्वारा चाइनिज ताइपेईलाई २–० गोलअन्तरले पराजित
काठमाडौँ, २१ जेठ: चाइनिज ताइपेईविरुद्धको खेलमा नेपाल विजयी भएको छ । कुवेतको जाबेर अल अहमद मैदानमा बिहीबार राति भएको खेलमा नेपालले चाइनिज ताइपेईलाई २–० गोलअन्तरले पराजित गरेको हो । सन् [...]
विश्वकप फुटबल छनोट : नेपाल चाइनीज ताइपेईसित खेल्ने तयारीमा
काठमाडौँ, २० जेठ: सन् २०२२ मा कतारमा हुने विश्वकप तथा २०२३ मा चीनमा हुने एसिया कपको संयुक्त छनोटअन्तर्गत दोस्रो चरणको छनोट खेलमा आज नेपालले चाइनिज ताइपेईसित खेल्दै छ । कुवेतको [...]
लामिछाने ट्रिन्बागो नाइट राइडर्सबाट सिपिएल खेल्ने
काठमाडौँ । नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका सदस्य सन्दीप लामिछानेले सन् २०२१ को क्यारेबियन प्रिमियर लिग (सिपिएल) ट्रिन्बागो नाइट राइडर्सबाट खेल्नुहुने भएको छ । राइडर्सले उहाँलाई ड्राफ्टमार्फत टोलीमा समावेश गरेको हो [...]
मैत्रीपुर्ण खेल खेल्न नेपाली फुटबल टोली इराक प्रस्थान
काठमाडौँ । नेपाली फुटबल टोली मैत्रीपुर्ण खेल खेल्न आज राति इराक जाने भएको छ । इराकसँगको मैत्रीपुर्ण खेलका लागि नेपाली फुटबल टोली कतार एयरवेजबाट हिजो राति १० बजे इराक प्रस्थान [...]
गान्सु, ९ जेठ: चीनमा १०० किलोमिटरको म्याराथन दौड प्रतियोगितामा सहभागी भएका बेला १६ जना प्रतियोगीको मृत्यु भएको छ । प्रतियोगितामा सहभागी भएका मध्ये अरु पाँच जना अझै पनि बेपत्ता रहेको [...]
टोकियो । जापानको राजधानी टोकियोमा हुने तय भएको ओलम्पिक प्रतियोगिताको तयारी तीव्ररूपमा भइरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटिका पूर्व उपाध्यक्ष तथा टोकियो ओलम्पिकका इन्चार्ज जोन कोट्सले जापानका धेरै ठाउँमा सङ्कटकाल [...]